Mofon’aina – ALAROBIA 05 JOLAY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 05 JOLAY 2017
5 jolay 2017
Asan'Andriamanitra, Iraka, Jesoa
21 Ary hoy indray Jesoa taminy: Fiadanana ho anareo; tahaka ny nanirahan’ ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa.22 Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina;23 na helok’ iza na helok’ iza no avelanareo, dia voavela izany; ary na an’ iza na an’ iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany.24 Fa Tomasy, anankiray tamin’ ny roa ambin’ ny folo lahy, ilay atao hoe Didymo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesoa.25 Dia hoy ny mpianatra sasany taminy: Efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy: Raha tsy hitako eo amin’ ny tànany ny holatry ny nohomboana, ka ataoko eo amin’ ny holatry ny nohomboana ny rantsan-tanako, ary ataoko eo amin’ ny lanivoany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho.26 Ary nony afaka havaloana, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesoa, rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe: Fiadanana ho anareo.27 Ary hoy Izy tamin’ i Tomasy: Atehefo eto ny rantsan’ tànanao, ka jereo ny tànako; ary atehefo eto koa ny tànanao, ka ataovy amin’ ny lanivoako; ary aza ho isan’ izay tsy mino, fa minoa.28 Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro!29 Hoy Jesoa taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino.30 Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon’ i Jesoa teo imason’ ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin’ ity boky ity;31 fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesoa no Kristy, Zanak’ Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ ny anarany, raha mino ianareo.
JAONA 20 :21-31
MANIRAKA ANTSIKA NY TOMPO
Rehefa nitsangana tamin’ny maty Jesoa dia niseho indray tamin’ny mpianany sady nampahery azy ireo mba ho vavolombelony. Ireto no takin’ny Tompo amintsika manaiky ho iraka sy ho vavolombelony :
1-Hanohy ny asa efa natombok’i Jesoa (and 21)
Tahaka izay nanirahan’ny Ray Ahy an’i Jesoa koa no nanitrahany ny mpianany , ary toy izay nanirahan’i Jesoa ny mpianany no hanirahany antsika koa . Izany dia ny hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao hialany amin’ny fahotana sy ny sy finoana. « Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao » (Jao 3 :17)
2-Handray ny Fanahy Masina (and 22)
Efa nampanantena ny mpianany ny Tompo fa hanome ho azy ireo ny Fanahy Masina. Tsy afaka hanatanteraka irery ny asa miandry antsika isika raha tsy eo ny fitarihan’ny Fanahy Masina , izay hany afaka hanampy ny fiangonana hahafahany mijoro ho vavolombelon’ny Tompo eto amin’izao tontolo izao . Raiso amin’ny finoana fa efa nomen’i Jesoa ho anao ny Fanahy Masina.
3- Hampiorina finoana(and 27)
Maro amintsika no tahaka an’i Tomasy :tsy mety mino raha tsy mahita . Ampy ho fanoreanna ny finoantsika ny Tenin’ Andriamanitra sy ny famantarana ny amin’ny sakramenta. « Fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesoa no Kristy Zanak’ Andriamanitra, ary mba hananareoa finoana amin’ny Anarany raha mino ianareo »(and 31). Maneke an’i Jesoa ho Tompo sy Andriamanitra ka minoa Azy.
Inona amin’izay asa efa nataon’i Jesoa no mba efa nataonao ?
Mofon'aina - TALATA 04…